Sheekada filimka Thaanaa Serndha Koottam: Suriya si wacan ayuu uga baxsaday dib u sameynta filimka Special 26 – Filimside.net
Tamil Superstar Suriya maanta waxaa tiyaatarada loo saaray filimka Thaanaa Serndha Koottam oo ah mid sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Bollywood-ka ah Special 26 ee Superstar Akshay Kumar sameeyay sanadii 2013.
Jilaayaasha: Suriya, Keerthy Suresh, Ramya Krishnan, Kalaiarasan, Nandha, Senthil, Sathyan,
Qiimeynta Sheekada Filimkaan: 3/5
Fariinta Filimka Thaanaa Serndha Koottam Xambaarsan Yahay: Uttham Das (Suriya) wuxuu doonayaa inuu noqdo sarkaal CBI-da ka tirsan balse riyadiisa waxaa bur burinayaan saraakiil musuq maasuq qalbiga ka galay oo aan hormarka dhalinta daacada ah jecleyn.
Uttham Das (Suriya) oo ka careesan cadaalad xumada ka jirto xarunta CBI wuxuu go’aan ku gaaraa inuu sameesto koox isaga u gaar ah oo dadka aan canshuurta bixin bartilmaameed ka dhigtaan kana dhacaan hantida guryaha u taalo.
Sarkaal kale oo CBI-da ka tirsan (Karthick) ayaa loo xil saaraa inuu gacanta ku gacanta kusoo dhigo Uttham Das (Suriya) kuwaas oo damacsan inay dhac ka geestaan hab xeeladeesan bangiyada ugu weyn Hindiya.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan Suriya doorkiisa filimkaan dhaca iyo qayaanada xeeladeesan isku jiro sheekada oo wacan ayuu hadana Suriya sii qurxiyay filimkana heerka sare ah.
Ramya Krishnan door adag ayay filimkan ku leedahay waxayna u madan tahay amaan gaar ah balse Keerthy Suresh door ku filan ma helin inkastoo iska yara roontay halka Karthik uu si fiican kaga baxday doorkiisa ah inuu Suriya gacanta kusoo dhigo.
Fariinta Filimka Thaanaa Serndha Koottam: Director Vignesh Shivn waa shaqsi caqli badan sheekada filimka Bollywood-ka ah Special 26 wuxuu ka dhigay mid dadka reer Tamil ama Kollywood aqbali karaan xoogaa waxbuu ku duran si ay xiligaan fariinta ula jaan qaado wuuna ka baxsaday qaabka uu sheekada isugu daba riday.
Qaybta hore filimkaan waa mid heer sare ah xoogaa qeybaha dhexe ayaa caajis ka muuqdaan halka qaybaha dambe aan laga xiiso dhigeyn qayaanada faraha badan iyo dhaca xeelada ku dheehan Suriya iyo kooxdiisa ku guuleesanayaan.
Sedex Arimood uu filimka TSK heer sare ku yahay:
Sheekada filimka sida la isugu daba riday
Dhamaadka filimkaan qaabka xeeladeesan dhaca heerka sare ah loo geesanayo
Labo Arimood uu filimka TSK ku liito:
Qaybta dhexe oo caajis ka muuqdo
Jaceylka oo sheeko ahaan lagu qasbay waxaa wanaagsaneyd fariinta jaceylka ah in la iska dhaafo ee filimkan lagu dhex lifaaqay.
Gunaanad: TSK waa filim Suriya ku fara yareestay sidoo kalena sheekadiisa si wacan la isugu daba riday una dheer tahay in miisaaniyad xadidan lagu sameeyay taasi waxay sababi doontaa in Superstar Suriya guusha u baahan yahay uu markaan helo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska kooban filimka TSK: